Wacom Bamboo Spark Review - News Fitsipika
Ny Wacom Bamboo Spark dia endri-javatra vitsivitsy monja miala tsy ho lehibe. Ny hevitra dia feo - manao ny indray ny pad manan-tsaina mba hahafahanao mampiasa misy taratasy.
Graphics takelaka mpanao ny rafi-taratasy vaovao mamantatra ny penina kapoka amin'ny ara-dalàna A5 taratasy sy outputs azy io ho toy ny sary, PDF, teny na nomerika ranomainty, nefa tsy mifanaraka mpifaninana
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Wacom Bamboo Spark Review: penina sy taratasy amin'ny nomerika tetika” nosoratan'i Samuel Gibbs, fa theguardian.com ny zoma 8 Aprily 2016 06.00 UTC
Ny Wacom Bamboo Spark dia ny penina-mpanao voalohany ezaka mba hanao taratasy kahie safiotra izay mirakitra ny scribbles sy ny doodles amin'ny endrika nomerika.
Nahoana no misy penina sy sary takelaka mpanamboatra manao penina rafitra? Satria mahatsapa taratasy sy mitondra tena amin'ny fomba hafa ny vera iray efijery na ambonin'ny takela-kazo iray, ary olona maro kokoa izany, nefa mbola te ho nomerika dika mitovy nefa tsy voatery mampiasa notarafina na sary.
Ny hafa no niezaka ny hanao izany, fa Wacom dia mampiasa fomba hafa mahaliana azy mpifaninana. Ny Bamboo Spark dia zavatra roa indrindra: fitsipika tarehy ballpoint penina sy manan-tsaina folio izay mihazona ny ara-dalàna ny taratasy pad A5.
Ny penina mitondra tena tahaka ny tsy ara-dalàna ballpoint penina; fa kely fotsiny matevina. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Tsy toy ny Livescribe Smartpen 3, tsy ny penina na taratasy izany marani-tsaina, fa ny pad ambanin'ny taratasy: fa toy ny fitaratra ny scrawls nomerika kapoka.
Tsy miasa amin'ny alalan'ny penina hamantarana hetsika ary ny sasany tsy fahazakana tsindry eo amin'ny pejy, mitahiry azy ireo ho fahatsiarovana sy ny famindrana azy ireo tamin'ny alalan'ny Bluetooth ny Bamboo Spark fampiharana ny iOS na finday avo lenta na tablette Android.
Manao ny asa amin'ny penina eo amin'ny pejy, namely ny bokotra sy ny sary nomerika voavonjy dia ho taty aoriana. Avy eo ianao dia afaka miala ny pejy sy manomboka indray. Afaka mampiasa Saika misy A5 pad izay tsy matevina loatra – ny namatsy pad dia 30 lamba, Fa ny 50-taratasy ihany koa ny pad miasa. Izany no lehibe indrindra Bamboo Spark differentiator toy izany koa ny hafa teknolojia: tena mitaky taratasy ahafahany manara-maso manokana ny filan'ny.
Flick ny jiro eo ambany sy ny nahatonga mampiseho maitso ny milaza aminareo fa na inona na inona Powered tamin'ny sy ny efa voasoratra ao amin'ny pejy. Ny LED manga, rehefa mitodika ny pad no tsikaritra ny sasany scribbles sy mamirapiratra ny penina manga, rehefa mikasika ny taratasy.
Tena tsotra be noho ny mpifaninana, izay sady tsara sy ny ratsy amin'ny fepetra mitovy.
Ny folio manakimpy ny hitandrina ny taratasy, penina, pad sy ny Gadget voaaro ho an'ny lalana. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny tsara indrindra dia ny kely mahatsapa penina ara-dalàna, toy ny kely na lehibe kokoa ballpoint. Fa mahatsapa ihany koa somary mora, ny penina Cap foana tsy hijanona eo ny farany, rehefa ampiasaina ary afaka manova ny ballpoint ihany cartridge – tsy afaka mampiasa ny toerana tena penina.
Mahamenatra izany fotsiny dia tsy mahatsiaro ho kely tsara fanahy kokoa, nanome izany dia lafo tapa-teknolojia.
Ny folio mahatsapa tsara ny atao, fa dia tena mibahan-toerana ho toy izany Karine – ary A5 afaka ny ho tena tery ny naoty ilainy sy ny sary. Izany dia kely paosy taratasy kely ho an'ny penina, natao ny Clip, fanao am-paosy fa nandritra ny taratasy sy ny andriamby clasp ny mihazona azy amin'ny toerany.
Ny dikan-pitsapana aho nanana ny zavatra Wacom miantso ny "Gadget paosy", nefa ny sasany kosa manana horonantsary takela-kazo sy ny kofehy mifamatotra hafa izay mety ho ilaina kokoa ho an'ny sasany.
Soratra teo amin'ny pad mahatsapa voajanahary, fa ny ampahany lehibe ny sisa amin'ny folio dia afaka mahazo an-dalana. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Fa voasoratra mandray an-tsoratra tsara ny rafitra miasa. Hamita ny pejy, namely ny bokotra sy mifandrindra amin'ny fampiharana. Avy eo dia afaka hanondrana ny sora-tanana toy ny soratra tsoratra mampiasa sora-tanana fankatoavana, toy ny JPG sary, toy ny PDF na ho toy ny Wacom Ink Layer Language (hanao) hametraka ny fanondranana ny hafa izay manohana ny fampiharana inking endrika nomerika.
The Spark Bamboo fampiharana, raha kely indrindra amin'ny Android, Tsy tena tsara mandroso. Afaka hanondrana iray ihany amin'ny fotoana pejy, izay afaka mahazo mahakivy, ary ny soratra fankatoavana, raha mbola misy koa tonga soa, dia tsy ho amin'ny feh amin'ny mpifanandrina. Tsy zatra gobbledygook ahy na dia ho an'ny sora-tanana neatest.
Ny sary koa aondrana ho toy ny kofehy mifamatotra Evernote, tsy miorim-paka sary, miaraka amin'ny fanitarana ".null" tsy JPG, izay midika hoe tsy maintsy tanana Hanova anarana azy io mba hahazoana azy io mba haneho araka ny tokony ho ary hanampy azy indray ny naoty mba haka izany mba haneho in-tsipika.
Ny fanamarihana aondrana amin'ny sary, anisan'izany ny sasany hafahafa upticks eo amin'ny faran'ny taratasy, izay mazava ho azy fa ny sasany nania ampy ny penina. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Nalaina an-A5 pad mahatsapa toy ny hifandray amin'ny hafa, fotsiny amin'ny ampahany kely bebe kokoa avy amin'ny folio manodidina. Sketch amin'ny Cheryl Pilbeam. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny rafitra manohana ny fanerena fahatsapana, fa ny zava-misy ihany no manafaka amin'ny sarotra na fitaovana fanerena. Light tsipika tsy hahazo naka, izay mahatonga tsara sketches kely voa sy ny Miss; ny mpampiasa dia tsy mahalala na ny andalana izay hita mazava tsara eo amin'ny pejy araka ny marina no voasambotra na tsia.
Shading ihany koa fa mimari-droa. Raha misy tsipika efa naka, andalana bebe kokoa noho ny ambony ao amin'ny andian-tsoratra fotsiny vokatry ny loko, izay tsy foana ny vokany mahafinaritra sy azo antoka fa tsy hita taratra inona no hita ao amin'ny pejy.
-Dalana, dia fantarina marina, na izany aza, raha toa ilay pejy tsy mihetsika, midika ireny, araka mahitsy na araka ny tananao curved dia afaka mitantana. Fa ny pejy manao hetsika, ary tsy maintsy hatao eo raha tsy izany ny kapoka dia babo avy tany mifanaraka amin'ny ny sary, izay mety hiafara amin'ny korontana.
Ny sary mazava tsara aondrana ampy ny ankamaroan'ny kapoka maivana penina, raha ny taratasy dia nifindra kely raha mpitan-, manao andalana sasany hiseho amin'ny toerana. Sketch amin'ny Cheryl Pilbeam Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny Wacom Bamboo Spark dia endri-javatra vitsivitsy monja miala tsy ho lehibe. Ny hevitra dia feo – manao ny indray ny pad manan-tsaina mba hahafahanao mampiasa misy taratasy. But the A5 pad is quite limited, it moves around causing issues for notes and drawings and the app-side of the pairing, where all your digital notes are processed, is not up to scratch.
Unlike competitors there’s no audio recording capability, the handwriting recognition isn’t the best, but the pen, while feeling a bit cheap, is much closer to being a normal pen than most rivals. Izany ihany koa ny iray amin'ireo vahaolana mora indrindra misy sy ho afaka hanondrana ny Wacom ny endrika nomerika inking mety ho tena ilaina ho an'izay mitady ny hampiasa izany ho mihoatra noho ny notetaking.
Mahatsara: afaka mampiasa A5 misy taratasy, mendrika soratra traikefa, tsotra mba hitahiry sy famindrana inking, Wacom Ink Layer Language fanondranana
Maharatsy ny mifampiresaka: pad kely, mibahan-toerana folio, levitra-fihetseham-po penina, pejy hetsika, tsy misy feo peo, voafetra fampiharana, fanondranana Mety hahakivy
Taratasy oharina nomerika output. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Livescribe Smartpen 3 Black Edition famerenana: ny Pen 2.0
Apps, Article, Gadgets, Ny fiainana sy ny fomba, Famerenana, Samuel Gibbs, Teknolojia, UK Teknolojia
← Huawei Namoaka Ny P9 sy P9 Plus finday mba Raiso ny iPhone sy ny Vondron-kintana Indrindra mialoha Playstation 4 Games [RANKER] →